ေ​ရ​တိမ်ဆို​ခတ်မ​ရြ​ခ​င်း​အေြ​ကာ​င်းကေ​တာ့​.. New V.Rohto ဟာ Vitamin အုပ်စု​၀​င်ြ​ဖ​စ်ြ​ပီး မျက်စိ​အားေ​ဆး​တ​စ်မျိုးြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ မျက်စိ​အားြ​ဖ​ည် Vitamin အများ​စု​ဟာေ​ရ​တိမ်မြ​ဖ​စ်အော​င်အန​ည်းင​ယ်
ကာ​ကွယ်နိုင်စွ​မ်းရှိေ​သ်ာလ​ည်းေ​ရ​တိမ်ရှိေ​န​ပါ​က Vitamin အုပ်စု​၀င်မျက်စိ​အားေ​ဆး​ကို​သုံးလျှင်အြ​မင်အာ​ရုံ​ကို​ပိုြ​ပီး​လျော့ကျေ​စ​နို​င်ေ​သာေြ​ပာင်ြး​ပန်အကျိုး​သ​က်ေ​ရာက်မှုေြ​ကာ​င့်ြ​ဖစ်သ​ည်။
ထို့ေြ​ကာ​င့်ေ​ရ​တိမ်ရှိေ​န​သည်ဟု သိြ​ပီး​ပါ​က New V.Rohto ကဲ့​​သို့ေ​သာ Vitamin အုပ်စု​၀င်မျက်စိ​အားေ​ဆးများေ​ရှာ​င်ြ​က​ဉ်ပြီး မျက်စိ​ဆရာ​၀​န်ဖြင့်တိုင်ပင်သ​င့်ပါ​သ​ည်။
New V.Rohto ဟာ ၁​၅ နှစ်မှ​စြ​ပီး​ခတ်လို့​​ရ​တယ်လို့​​မ​ဟုတ်ပါ​ဘူး။ ၅ နှစ်ကေ​န​စြ​ပီး​ခတ်နိုင်ပါ​တ​ယ်။ New V.Rohto က မျက်စိ​အားြ​ဖ​ည် Vitaminြ​ဖ​စ်ပီး မျက်စိ​အား​န​ည်းေ​ညာ​င်းညာ​ကိုက်ခဲ​မှု​ အတွ​က်
အထူးေ​ကာ​င်းေ​သာေြ​ကာ​င့်ဖြစ်ပါ​တ​ယ်။ သို့ေ​သ်ာသတိြ​ပု​ရ​မည်မှာ မျက်စိြ​ပ​င်း ​ထန်စွာ​ထိ​ခိုက်မိြ​ပီး မျ​က်ြ​ကည်လွှာ​ပွ​န်း​ပဲ့​​ဒဏ်ရာ​ရေ​နလျှ​င် မည်သ​ည့်အရွယ်အ​ဆို အသုံးြ​ပု​ရန်မ​သ​င့်ေ​ပ။ ထို​ဒဏ်ရာများ
ေ​ကာ​င်း​တာ​က​ဘာ​လဲ မေ​ကာ​င်းတာ​က​ဘာ​လဲ။ေ​ရ​ရှည်သုံး​ရင်ဘာြ​ဖစ်နိုင်မ​လဲ။
NeV.Rotho မှာေ​ကာ​င်း​တာေ​တွ​ကေ​တာ့​​အများြ​ကီး​ပါ​ပဲ..။ မျက်စိ​ကို​အြ​မင်အာ​ရုံြ​ကည်လင်ရုံမျှ​မက၊မျက်လုံး​အိမ်ရှိေ​သွးေြ​ကာ များ​နီ​ရဲြ​ခ​င်း၊ မျက်သား​တ​က်ခြ​င်း၊ေ​ညာ​င်း​ညာ​ကိုက်ခဲြ​ခ​င်း၊ မျက်လုံးေ​သွး
ေြ​ကာေ​လးများ​ဖွ​င့်ေ​ပးြ​ခင်း၊ မျက်စိ​ယားယံြ​ခ​င်း၊ ခ​ရ​မ်းလွ​န်ေ​ရာ​င်ခြ​ည်ြေ​ကာ​င့် မျက်စိ​အြ​မ​င်ေ​၀​၀ါးြ​ခ​င်း၊ မျက်ရည်ပူ​နှ​င့် မျ​က်ကပ်မှန်အတက်များြ​ခ​င်း၊ အသက်အ​ရွယ်အ​ရေ​သ်ာလ​ည်းေ​ကာ​င်း၊ြ​ပ​င်းထန်သော
ေ​ရာ​ဂါေြ​ကာ​င့်ေ​ဆးြ​ပ​င်းများေ​သာက်ရေ​သာေြ​ကာ​င့်ေ​သ်ာလ​ည်းေ​ကာ​င်း ရ​ရှိ​တ⁠တ်သော မျက်ရည်ခ​မ်းေြ​ခာ​က်ေ​ရာ​ဂါများ​ကို အထူး​ကာ​ကွ​ယ်ေ​ပးြ​ပီး မျ​က်ဝန်းအစို​ဓါတ်ကိုေ​ကာ​င်းစွာ​ ထိ​န်းသိမ်းနိုင်စွမ်း
မေ​ကာ​င်းတဲ့​​အချက်ဆို​တာ​ထ​က် New V.Rohto eye drop ကို​သုံး​မည်ဆိုလျှ​င်ေ​ရှာင်သ​င့်တဲ့​​အချ​က်ေ​လးေ​တွေ​တာ့​​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ အဲ​ဒါ​ကေ​တာ့​ New V.Rohto မျက်စ​ဉ်း​ရယ်မှ မ​ဟုတ်ပါ​ဘူး။ အြ​ခား
Chemical productsေ​တွ​မှာ လ​ည်းေ​ရှာင်သ​င့်တဲ့​ အချက်ကေ​လးေ​တွ​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ ဒီေ​တာ့​ New V.Rohto eye drop ကို​သုံး​မည်ဆိုလျှ​င်မျက်ကပ်မှန်တပ်သူများ မျက်ကပ်မှန်ချွ​တ်​ပီး နာရီ​၀က်ခန့်
်ေ​န​မှ အသုံးြ​ပု​ သ​င့်ပါ​သ​ည်။ မျက်ကပ်မှန်တပ်လျက်နှ​င့် New V.Rohto ခ​တ်၍​မ​ရ​ပါ။ မျက်စိ​ခွဲ​စိတ်ထား​သူများ ၆​လ နှင့်အထ​က်ဆရာ​၀န်ခွ​င့်ပြု ပြီး​မှ ခတ်သ​င့်ပါ​သ​ည်။ မျက်စိ​ခွဲြ​ပီးြ​ပီးချ​င်း ခ​တ်၍​မ​ရ​ပါ။
ေ​ရ​တိမ်ရှိ​သူများ​ခတ်ရန်မ​သ​င့်ပါ။ေ​ရှာင်သ​င့်သ​ည်အချက်များ​ကိုေ​သချာ​စွာ လိုက်နာေ​ရှာင်ရှားြ​ပီး အသုံးြ​ပုလျှ​င်မေ​ကာ​င်းေ​သာ​အချက်ဆို​တာ New V.Rohto မျက်စ​ဉ်းေ​ဆး​တွ​င် မ​ရှိ​နို​င်ေ​တာ့​​ပါ။
New V.Rohto မျက်စ​ဉ်းေ​ဆး​ကို​အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်းဖြင့်သင်ကျ​န်းမာ​ပျော်ရွှင်နိုင်ပါေ​စ..။
Acnes Powder Lotion ကိုေ​ဆး​ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ​၀ယ်ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ ဖွ​င့်ပြီး​အသုံး​မြ​ပု​ မီ ဘူး​ကို​လှုပ်ေ​န​စဉ်မှာ အတွ​င်းမှာ လုံး​၀ေ​ပါင်ဒါ​မှုန့်မ​ပါ​ပဲေ​ရ​ကဲ့​​သို့​​အြ​က​ည်ေ​ရာင်ပဲြ​ဖ​စ်နေ​ပါ​တ​ယ်ဘယ်လို​ဆက်လက်
A:အခု​လိုြ​ကား​ရ​တဲ့​​စိတ်မေ​ကာ​င်း​ပါ​ဘူး။ ဒါ​ဟာ​သ​င့်ဆီ​က​ပထမ​ဦး​ဆုံး​ရ​တဲ့ြ​ဖစ်စဉ်ပဲြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ သ​င့်ရဲ့​ Address နဲ့​ ဖု​န်း​နံ​ပါ​တ်ေ​လးများေ​ပး​နိုင်မ​လား။ ငါ​တို့​​ရဲ့​ Sales rap က​သ​င့်ဆီ​က
ပ​စ္စ​ည်းကို​သွား​ယူြ​ပီးြ​ပန်လည်စ​စ်ေ​ဆး​ရန်အ​တွက်ပဲြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ခု​လို ပူးေ​ပါ​င်းပါ​၀​င်ေ​ပး​လို့​ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​တ​ယ်။ ကျွန်တော်တို့​​က ယခု​သ​င်ပေးေ​သာ သ​တ​င်းအချက်အ​လက်များ​ကို​ရုံးချုပ်သို့​
တ​င်ပြေ​ပး​မ​ည်ြ​ဖ​စ်ပြီး ရုံးချုပ်မှ သုံး​စွဲ​သူ​သို့​​တိုက်ရိုက်ဆက်သွ​ယ်ြ​ပီး Sample ကို​ရ​ယူ​နိုင်ရ​န်ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။
Erythromycin ကို အရင်က​၀​က်ခြံ​ကု​သ​ရန်အ​တွ​က်အသုံးြ​ပု​ ခဲ့ေ​ပ​မ​ယ့်ထိေ​ရာက်မှု​မ​ရှိ​ပါ။ ACD ကို ၀​က်ြ​ခံ​အ တွ​က်ေြ​ပာ​င်ြး​ပီး​ကု​သြ​ပီးေ​နာ​က်မျက်နှာ​တွ​င်ယားယံြ​ပီး အလွန်ပူ​စ​ပ်သ​ကဲ့​​သို့​​ခံစား​ရ​ပါ​သ​ည်။
အသား​အေ​ရ​ထိ​န်းပ​စ္စ​ည်းတစ်ခု​ခု​ကို အသုံးြ​ပုေ​တာ့​​မည်ဆိုလျ​င်အသုံး​မြ​ပု​ မီ ဦး​စွာ​စ​မ်း​သပ်မှုြ​ပု​လုပ်ရ​န်လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ အက​ယ်၍ သ​င့်အသား​အေ​ရ​တွ​င်ပုံ​မှန်မ​ဟု​တ်သောြ​ဖစ်စဉ်မျာြး​ဖ​စ်ေ​ပါ်​လာ​ပါ​က အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်းကို ချက်ချင်းး​ရပ်တ​န့်ပါ။ ၀​က်ခြံ​ကို​အေ​ကာ​င်း​ဆုံး ကာ​ကွယ်ကု​သ​ရန်အ​တွ​က်Acnes Creamy washြ​ဖ​င့်မျက်နှာ​သစ်ပါ။ Acnes Oil solution ကို​အဆီ​ထိ​န်းရန်နှ​င့် AC3N ကို ၀​က်ြ​ခံ​ကု​သရ​န်အတွက်အ​သုံးြ​ပုြ​ခ​င်းအထိေ​ရာက်ဆုံး အာ​နိ​သင်ကို​ရ​ရှိေ​စ​မ​ည်ဖြစ်ပါ​သ​ည်။ ၀​က်ြ​ခံများ​ပျောက်က​င်း​သွား​ပါ​က AC3N အသုံးြ​ပုေ​နြ​ခ​င်းက ရ​ပ်ြ​ပီး Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က်ြ​ခံေြ​ကာ​င့်ပျက်စီး​သွားေ​သာြ​ပန်လ​ည်ေ​ကာ​င်းမွ​န်ေ​စ​ရန်အ​တွ​က် ဆ​က​လက်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေ​နပ်မှု​အထူး​ရ​ရှိ​မည်ဟု​မျှော်လ​င်ပါ​သ​ည်။
Acnes offensive cream ကို​ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ရ​မ​လဲ။
ခ​ရင်မ်ကို​အန​ည်း​ငယ်ယူြ​ပီး affected area များ​သို့​​လိ​မ်း​ပါ။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င်၂-၃ြ​ကိ​မ် မျက်နှာ​သ​စ်ြ​ပီးေ​နာက်အ​သုံးြ​ပု​နို​င် ပါ​သ​ည်။
အဆီများေ​သာ T zone area (သို့​) ချွေးေ​ပါက်များ​ရှိ​ပိုလျှံေ​နသော​အဆီများ​နှ​င့်ဖုန်များ​ကို​ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ သ​ည်။ အချိန်မေ​ရွး​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
ကျွန်ုပက​အသား​အေ​ရ​က​အဆီြ​ပန်တဲ့​​အမျိုး​အစားြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ၀​က်ခံများ​ကို​ဘယ်လို​ကု​သရ​မ​လဲဆို​တာ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီးေြ​ပာြ​ပေ​ပး​ပါ။
၁. Acnes Foaming wash ကို ချွေးေ​ပါက်တွ​င်း​ရှိ ဖုန်အ​ညစ်အေြ​ကးများ​ကို​ဖယ်ရှား​နိုင်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ ပါ။
၂. ပိုလျံေ​နသော​အဆီများ​ကို ထိ​န်း​ရန်နှ​င့် ချွေးေ​ပါက်များကျ​ဉ်း​ရ​န်၊ အေ​ရြ​ပား​အစို​ဓါတ်ကို ထိ​န်း​ညှိ​နိုင်ရန်အ​တွ​က် Powder Lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။
၃. ၀​က်ြ​ခံြ​ဖ​စ်ေ​စေ​သာ ဗက်တီး​ရီး​ယား​ပိုးများ​ကိုေ​သေ​စ​ရန်နှ​င် ၀​က်ြ​ခံများ​ကို​ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် AC3N ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။ ၄​င်းပ​စ္စ​ည်း များ​ကို သ​င့်ေ​န့​​စဉ်အား​လပ်ချိ​န်ေ​ပါ်​မူ​တ​ည်ပြီး ၂ြ​ကိမ်မှ ၃ြ​ကိ​မ်အထိ​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။ ထို့​​အြ​ပ​င်ေ​န့​​စ​ဉ်အစား​အေ​သာ​က် အေ​န​အထိုင်နှ​င့်အသား​အေ​ရ​ထိ​န်း​ပ​စ္စ​ည်းများ အသုံးြ​ပုေ​ပး​ပါ​က ၀​က်ခြံ​ကို ​ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ၄​င်းအချက်မျာအပေါ်တွင် မူ​တ​ည်ပြီး​ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
အဆီြ​ပ​န်ေ​သာ အသား​အေ​ရ​အမျိုး​အစားြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ မိတ်ကပ်ကို​လ​ည်းေ​န့​​စဉ်အ​သုံးြ​ပု​ပါ​တ​ယ်။ မည်သ​ည့် Acnes ပ​စ္စ​ည်း​အမျိုး​အစား​ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သလဲ။
A:ေ​အာက်ပါ​အချက်များ အတို​င်းလိုက်နာေ​ဆာင်ရွက်သ​င့်ပါ​တ​ယ်။
၁. ချွေးေ​ပါက်အ​တွ​င်း​ရှိ အဆီများ၊ဖုန်များ အညစ်အေြ​ကးများ​ကို ဖယ်ရှား​သန့်စင်ရန်အ​တွ​က် Acnes Foaming wash ကို အသုံးြ​ပု​ သ​င့်ပါ​သ​ည်။
၂. အဆီ​များကို ထိ​န်း​သိ​မ်းရန်နှင့် ဝက်ခြံပေါက်များကျဉ်းေ​စ​ရ​န်၊ အစို​ဓါတ်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် Acnes Powder lotion ကို အသုံး​ပြုနိုင်ပါ​သ​ည်။
၃. ၀​က်ြ​ခံ​ကို​ကာ​ကွယ်ရန်နှ​င့်ေ​နေ​လာင်ဒဏ်အန္တာ​ရယ်မှ​က​င်းေ​၀း​နိုင်ရန်အ​တွ​က် Acnes Make up Base နှ​င့် Acnes C10 ကို​အ သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
Q: Acnes Powder Lotion ကို​ဘယ်အချိန်မှာ ၄​င်း​ကို​အသုံးြ​ပု ​နိုင်ပါ​သလဲ။
A: အသုံး​မြ​ပု​ မီ​ဘူးေ​သချာ​စွာ​လှုပ်ပါ။ လုံေ​လာ​က်သော​ပမာဏ​ခ​န့်ယူြ​ပီး Acnes Powder Lotion ကို cotton Padြ​ဖ​င့်အဆီြ​ပ​န်ေ​သာ မျက်နှာ တ​စ်ပြင်လုံး​သို့​ အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င် န​စ်ြ​ကိမ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ မျက်နှာ​သန့်စင်ြ​ပိးေ​နာ​က် Acnes Powder lotion ကို အသုံးြ​ပု​ နိုင်သ​ည်။
Q: ၀​က်ြ​ခံများ​ပျောက်က​င်း​ရန်အ​တွ​က် Acnes Powder Lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သလား။
A:အသုံး​ရန်မ​သ​င့်ေ​တ်ာပါ။ Acnes Powder Lotion သ​ည် အဆီများ​ကို​လျော့​ချေ​ပး​ရ​န်၊၊ ၀​က်ခံ​ကာ​ကွယ်ရ​န်၊ ချွေးေ​ပါက်များကျ​ဉ်းေ​စ​ရ​န် အတွ​က်ဖြစ်ပြီး ၄​င်းသ​ည်ဝ​က်ခံများ​ကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ၀​က်ခြံ​များ​ကို​ကု​သ​ရန်အတွက် Acnes Sealing Gel ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေဇူးတင်ပါသည်။
Q: Acnes Scar Care ကို တစ်ပ​တ်လျောက်အသုံးြ​ပု ​ခဲ့ေ​ပ​မ​ယ့် ထိေ​ရာက်မှု​ကို​မေ​တွ့​​ရေ​သး​ပါ​ဘူး။
A: ၄​င်းအမဲ​စက်များ​သ​ည်ဝ​က်​ခံ​ကု​သြ​ပီးေ​နာ​က် ထွ​က်ေ​ပါ်​လာြ​ခ​င်းြ​ဖစ်သ​ည်။ ၄​င်းကို​ကု​သရန် အန​ည်းဆုံး​အချိ​န် ၄ ပတ်ယူ​ရ​ပါ​တ​ယ်။ အမဲ​စက်ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် စိတ်ရှည်ရ​န် လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င် ၂-၃ြ​ကိမ်အ​ထိ​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ေ​နရော​င်ေ​အာက်တွ​င်သွား​လာ​လှုပ်ရှား​မည်ဆိုလျ​င်ဦး​ထု​ပ် ၊ေြ​ခ​အိ​တ်၊ လက်အိတ်များ​ကို အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်းြ​ဖ​င့် ကု​သ​မှု​ကို​ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​ပါ​သ​ည်။
Q:Acnes Scar care ကို​အြ​မ​င့်ဆုံး​အဆ​င့် ထိေ​ရာက်မှု​ရှိေ​စ​ရန်မည်သ​ည့်အချိန်တွင်အ​သုံးြ​ပု​ရ​မည်န​ည်း။
A:၄​င်းကိုမျက်နာ​သစ်ြ​ပီးေ​နာ​က် အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များေ​ပါ်​တိုက်ရိုက်လိ​မ်းေ​ပးြ​ခင်းြ​ဖ​င့်ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င် ၂ြ​ကိ​မ်သို့​ ၃ြ​ကိမ်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
Q:Acnes Scar care ကို မည်ကဲ့​​သို့​​အသုံးြ​ပု​ရ​မည်န​ည်း။
A: Acnes Scar care တွ​င်လု​ပ်ေ​ဆာင်ချ​က်၃ မျိုး​ရှိ​ပါ​သ​ည်။ အမာ​ရွတ်များ​ကို​ကု​သေ​ပးြ​ခ​င်း၊ အမဲ​စက်နှ​င့်ဝ​က်ခြံများ​ကို​ကာ​ကွယ်ကု​သေ​ပးခြင်းပ​င်ဖြစ်သ​ည်။ Acnes Scar Care ကို မျက်နှာ​သ​စ်ြ​ပီးေ​နာ​က်အမဲ​စက်အ​မာ​ရ့ွတ်များေ​ပါ်​သို့ေ​န့​​စဉ်အ​သုံးြ​ပုေ​ပး​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ထို​သို့​​ကု​သေ​န​စ​ဉ် ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​သာ​အာ​နိ​သင်ကို​ရ​ရှိ​ရန်အ​တွ​က်ေ​နရော​င်ခြ​ည်အောက်သွား​လာ လှုပ်ရှား​ရာ​တွ​င် ဦး​ထု​ပ်၊ Mask နှ​င့်ေ​နေ​လာင်ခံ ခ​ရင်မ်များ​ကို အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်ြး​ဖ​င် ပိုမိုေ​ကာ​င်း​မွ​န်ေ​စ​ပါ​သ​ည်။ ပုံ​မှန်အားြ​ဖ​င် အသ​စ်ဖြ​စ်ေ​ပါ်​လာေ​သာ အမဲ​စက်များ​ကို ၁-၃ ပတ်အ​တွ​င်း ကု​သြ​ပီးေ​နာ​က်အချိန်အ​န​ည်း​င​ယ်ြ​ကာြ​ပီြ​ဖ​စ်သော အမဲ​စက်များ​ကို အချိန်ယူ​ကု​သ​ရန်လို​ပါ​သ​ည်။ အမဲ​စက်အ​မာ​ရွတ်များ​ကို ကု​သ​ရာ​တွင်စိတ်ရှည်ရန်အထူး​လို​အပ်ပါ​သ​ည်။
Q: Acnes sealing gelြ​ဖ​င့်ဝ​က်ခြံများ​ကို မည်ကဲ့​​သို့​​ကု​သရ​မည်န​ည်း။ အသုံးြ​ပု​ ပုံ​ကို​ရှ​င်းြ​ပေ​ပး​ပါ။
A:ေ​အာက်ပါ​အဆ​င့် ၃ ဆင့် အတို​င်းလိုက်နာေ​ဆာင်ရွက်သင့်ပါ​သ​ည်။
၁။ Acnes Foaming Washြ​ဖ​င့်အဆီများ၊ ဖုန်များ၊ အညစ်အေြ​ကးများ နှ​င့် ချွေးေ​ပါက်တွ​င်း​ရှိ​အဆီများ​ဖယ်ရှား​ရ​န် မျက်နှာ​သစ်ပါ။
၂။ အဆီများ​ကို​ထိ​န်း​နိုင်ရ​န်၊ ချွေးေ​ပါက်များကျ​ဉ်းေ​စ​ရ​န်နှ​င့် အေ​ရြ​ပား​အစို​ဓါတ်ကို​ထိ​န်းသိ​မ်းနိုင်ရန်အ​တွ​က် Acnes Powder lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။
၃။ ၀​က်ြ​ခံြ​ဖ​စ်စေေ​သာ​ဗက်တီး​ရီး​ယား​ပိုးများ​ကိုေ​သေ​စ​ရန်နှ​င့်ဝ​က်​ခြံများ​ကို​ကာ​ကွယ်ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် Acnes sealing gel ကို​အသုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​သ​ည်။ Acnes series များ​ကို တ​စ်ေ​န့​လျှ​င်၂-၃ြ​ကိ​မ်အသုံး​ပြု ​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ထို့​​အြ​ပ​င် အစား​အေ​သာ​က်အေ​န​အ ထိုင်နှ​င့်အသား​အေ​ရ​ထိ​န်း​ပ​စ္စ​ည်းများ အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်းြ​ဖ​င့် ၀​က်ြ​ခံ​ကို​ပိုမို​ထိေ​ရာက်စွာ ကာ​ကွယ်နိုင်မ​ည်ြ​ဖစ်သ​ည်။
Q: Acnes sealing gel ကို ၀​က်ခြံ​ပျောက်က​င်းရန်အ​တွ​က် တစ်မျက်နှာ​လုံး​အသုံးြ​ပု​ ခဲ့​​စ​ဉ် သုံး​ရ​က်ြ​ကာြ​ပီးေ​နာ​က် မျက်နှာြ​ပင်မှာ ယားယံြ​ပီး နီ​ရဲ​လာ​ပါ​တ​ယ်။ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး အြ​ကံေ​ပးေ​စချင်ပါ​တ​ယ်။
A: အသုံးြ​ပု​ပုံ​မှား​ယွ​င်းေ​နြ​ခ​င်ြး​ဖစ်သ​ည်။ ၄​င်း​ကို ၀​က်ြ​ခံ​ဖုေ​လးများ​အေ​ပါ်​တွင်သာ​အသုံးြ​ပု​ရ​န်ြ​ဖ​စ်ြ​ပီး မျက်နှာ​တ​စ်ပြင်လုံး အသုံးြ​ပု​ ရ​န်မ​ဟုတ်ပါ။ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး​မှန်က​န်ေ​သာ အသုံးြ​ပု​ န​ည်း​အတို​င်ြး​ပန်လည်အ​သုံးြ​ပုေ​စချင်ပါ​သ​ည်။ ထို​သို့​​အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်ြး​ဖ​င့်​ နီ​ရဲ ယားယံြ​ခ​င်းများြ​ဖ​စ်ေ​ပါ်​လာေ​တာ့​​မည်မ​ဟုတ်ပါ။
Q: ကျွန်မ​က​ကို​ယ်ဝန်ရှိေ​နေ​တာ့ ၀​က်ြ​ခံ​အတွ​က် Acnes sealing gel ကို​အသုံးြ​ပု​လို့​​ရ​နိုင်မ​လား​ရှ​င့်။
A: ဟုတ်ကဲ့​​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​တ​ယ်။ သ​င်ေ​ရာ​သ​င့်ကေ​လး​အတွက်ပါ အန္တ​ရာယ်က​င်းေ​စ​ပါ​တ​ယ်။ အန​ည်း​င​ယ်ေ​သာ ပမာဏ​ကို​ယူြ​ပီး ၀​က်ခြံြ​ဖ​စ်ေ​သာေ​န​ရာေ​ပါ်​သို့​ တို့ြ​ပီး​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။တ​စ်နေ့​လျ​င် ၂-၃ြ​ကိ​မ်အထိ​အသုံးြ​ပု​နိုင်သ​ည်။ မျက်နှာ​သ​စ်ြ​ပီးေ​နာ​က် အသုံးြ​ပု​ နိုင်သ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​တ​ယ်။
Acnes sealing gel အသုံးြ​ပု ပုံ​ကို​ရှ​င်ြး​ပေ​ပး​ပါ။
Acnes sealing gel ကိုမျက်နှာ​သ​စ်ပြီးေ​နာ​က် ၀​က်ခြံ​ဖုေ​လးများေ​ပါ်​သို့​ တို့ြ​ပီး​လိ​မ်းေ​ပး​နိုင်ပါ​သ​ည်။ မျက်နှာ​တ​စ်ပြင်လုံး​အသုံးြ​ပု ရန်မ​လို​ပါ။ တ​စ်​နေ့​လျ​င် ၂-၃ြ​ကိမ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
အဆီြ​ပ​န်ေ​သာ​အသား​အေ​ရ​အတွ​က် Acnes series နှ​င့်မည်ကဲ့​​သို့​​ကု​သရ​မည်ကိုေ​ဆွး​နွေး​အြ​ကံေ​ပးေ​စချင်ပါ​တ​ယ်။
Acnes Foaming Wash ကို မျက်နှာ​သစ်ရန်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။ အဆီြ​ပ​န်ခြ​င်းကို သက်သာ​ပျောက်က​င်း​ရန်အ​တွ​က် Acnes Powder lotion ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ။ ၀​က်ြ​ခံ​ကို​ကု​သ​ရန်အ​တွ​က် Acnes sealing gel ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး ၄​င်း​သုံးမျိုး​ကို တွဲ​သုံးေ​ပး​ပါ။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
ကျွ​န်ေ​တ်ာကေ​တာ့​ Acnes series ကို တစ်ပ​တ်ြ​ကာ​အထိ​အသုံးြ​ပု​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ ပထမ​ဦး​စွာ Acnes foaming wash နှ​င့်၅ မိ​နစ်အြ​ကာ မျက်နှာေ​ဆးေြ​ကာ​သန့်စင်ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ြ​ပီးေ​နာ​က် Acnes powder lotion ကို ဒုတိယ​အဆ​င့်တွ​င်​အသုံးြ​ပုြ​ပီး တတိယ​အဆင့် အေ​နြ​ဖ​င့် Acnes sealing gel ကို တစ်မျက်နှာ​လုံး​လိ​မ်ြး​ပီး​အသုံးြ​ပု​ခဲ့​​ပါ​သ​ည်။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့်အခု ကျွ​န်ေ​တာ့် မျက်နှာ​ဟာြ​က​မ်ြး​ပီးေြ​ခာ​က်သွေ့​​လာ​ပါ​တ​ယ်။ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး အြ​ကံေ​ပးေ​စ​လို​ပါ​တ​ယ်။
ပထမ​အဆ​င့်နှ​င့်တတိယ​အဆ​င့်တွ​င်အသုံးြ​ပု​ပုံ​မှား​ယွ​င်းေ​နြ​ခ​င်းဖြစ်သ​ည်။ Acnes foaming wash ကို စ​က္က​န့် ၃​၀ မှ တစ်မိ​နစ်အ​ထိ​သာ အသုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​သ​ည်။ြ​ပီးလျ​င်ေ​ရများများြ​ဖင့်ချက်ချ​င်းေ​ဆးချ​ရ​န် လို​အပ်ပါ​သ​ည်။ Acnes sealing gel သ​ည်တစ်မျက်နှာ​လုံး​သုံး​ရန်အ​တွ​က် မ​ဟုတ်ပါ။ ၀​က်ြ​ခံ​ဖုေ​လးများေ​ပါ်​သို့​​တို့ေ​ပး​ရန်သာြ​ဖစ်သ​ည်။ ယခု​ကဲ့​​သို့​​မြ​ဖစ်ရ​န် မှန်က​န်​သော အညွ​န်းအတို​င်းြ​ပန်လည်အ​သုံးြ​ပုေ​စချင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Silky make up base ကို ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ ရ​ပါ​လဲ။
အသုံး​မြ​ပု​ မီ ဘူး​ကိုေ​သချာ​စွာ​လှု​ပ်ြ​ခ​င်းြ​ဖင့် ခ​ရင်မ်ကဲ့​​သို့ြ​ဖစ်လာ​မည်ကိုေ​တွ့​​ရ​လိ​မ့်မ​ည်။ ၄​င်းေ​နာ​က်မျက်နှာ​အနှံ့​​အသုံးြ​ပု​ နိုင်သ​ည်။ြ​ပီးလျှ​င်ေ​ပါင်ဒါ (သို့​) ခ​ရင်မ်ပါတ်ဖ် တစ်ခု​ခု​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Vitamin Cream ကို​မည်ဘယ်လို​အသုံးြ​ပု​ရ​မ​လဲ။
မျက်နှာ​သန့်စင်ပြီးေ​နာ​က် ခ​ရင်မ်ကို လုံေ​လာ​က်ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န့်ယူြ​ပီး မျက်နှာ​တစ်ြ​ပင်လုံး​အသုံးြ​ပု​ပါ။ အထူး​သြ​ဖင့်ဝ​က်ြ​ခံြ​ဖ​စ်ပြီးေ​နာက်မျက်နှာ အသား​အေ​ရြ​က​မ်းတ​မ်ြး​ခ​င်း မဲ​ည​စ်ြ​ခ​င်းများ​ကိုြ​ပန်လ​ည်ေ​ကာ​င်းမွန်လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။ ခ​ရင်မ်ကို အသား​အေ​ရ​တွ​င်း စိ​မ်ဝ​င်ေ​အာင်လိ​မ်းေ​ပး​ပါ။ေ​န့​​စဉ်အိပ်ယာ​မ​၀င်မီ​အသုံးေ​ပး​နိုင်ပါ​သ​ည်။
အသား​အေ​ရြ​ကည်လ​င်ဝ​င်း​ပေ​စ​ရ​န် ဗီ​တာ​မင်ခ​ရင်မ်ကိုေ​န့​​စဉ်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သလား။
ဟုတ်ကဲ့​​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​တ​ယ်။ မျက်နှာ​သန့်စ​င်ြး​ပီးေ​နာ​က် ဗီ​တာ​မ​င် ခ​ရင်မ်ကို တစ်မျက်နှာ​လုံး​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ြ​ဖ​ည်း​ညှ​င်း​စွာ​နှိ​ပ်ြ​ပီး​ အသုံးြ​ပု​ ရုံြ​ဖ​င့် အေ​ရြ​ပား​အတွ​င်းသို့​​စိ​မ့်ဝင်နိုင်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်​နေ့​လျင်တ​စ်ြ​ကိမ်မှ နှ​စ်ြ​ကိမ်အ​ထိ​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
အမဲ​စက်အ​န​ည်ငယ်ရှိေ​သာ​အသား​အေ​ရ​အတွ​က် ဗီ​တာ​မ​င် ခ​ရင်မ် ကို​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သလား။
သ​င့်အသား​အေ​ရ​တွ​င် အမဲ​စက်များ​ရှိေ​နေ​သးလျ​င် Acnes C10 ကို​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။ Acnes Vitamin Cream ကို အမဲ​စက်များ​သ​က်သာ​လာြ​ပီးေ​နာက်တွင်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Vitamin Cream ကို တ​စ်ေ​န့​လျ​င် ၂ြ​ကိမ်အ​သုံးြ​ပု​ ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ အဲ​ဒီေ​နာက်မှာ မျက်နှာ​မှာေ​ပါ်​မှာ ၀​က်ြ​ခံေ​သးေ​သးေ​လးများေ​ပါ​က်လာ​ပါ​တ​ယ်။ ထို့ေြ​ကာင့် Acnes Vitamin Cream သုံး​စွဲြ​ခ​င်းကို​ရပ်ဆို​င်း​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ ခ​ရင်မ်ေ​တွ နို့​​ရ​ည်ေ​တွ​ကို​အရင်က တစ်ခါ​မှ​အသုံး​မြ​ပု​ ခဲ့​​ပါ ဘူး။ အခု​ဘာ​လုပ်သင့်သလဲ​ဆို​တာ​အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ေ​ပးေ​စချင်ပါ​တ​ယ်။
ရာသီ​ဥတု၊ ပ​တ်ဝ​န်ကျင်နှ​င့်လေ​ထုများေြ​ကာင့်လ​ည်း မျက်နှာကျိ​န်းစပ်ြ​ပီး​ယားယံြ​ခ​င်းများြ​ဖစ်လာ​တတ်ပါ​သ​ည်။ ၄​င်းဗီ​တာ​မင်ခ​ရင်မ်သ​ည်ဝ​က်ခြံြ​ဖ​စ်ပြီးေ​သာ အသား​အေ​ရ​ကိုြ​ကည်လ​င်ဝ​င်းပေ​စြ​ပီး ပိုမို​ချောေ​မွ့​​လာေ​စ​ပါ​သ​ည်။ ထို့ြ​ပ​င်ဝ​က်ြ​ခံ​ထပ်မြ​ဖ​စ်အောင်လ​ည်း ကာ​ကွယ်တား​ဆီးေ​ပး နိုင်ပါ​သ​ည်။ ထို့ေြ​ကာ​င့် ယခု​အေြ​ခ​အေ​န​တွ​င် ပုံ​မှန်အ​သား​အရည်ရ​ရှိ​သ​ည့်အထိ​ရက်အ​န​ည်းငယ်ခ​န့်ေ​စာင့် ဆို​င်းြ​ပီး မှန်က​န်သော အညွှ​န်းအတို​င်ြး​ပန်လ​ည်အသုံးြ​ပုေ​စချင်ပါ​သ​ည်။ အသုံးြ​ပု​ ရာ​တွ​င်ခ​ရင်မ်ကို​အန​ည်းငယ်သာ အသုံးြ​ပု​သ​င့်ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
ကျွန်မမျက်နှာ​မှာ ၀​က်ြ​ခံ​န​ည်းန​ည်း​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ ကျွန်မ Acnes Powder lotion ကို နှစ်ရက်ဆက်တို​က် အသုံးြ​ပု​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ တ​စ်ေ​န့​​ကို နှစ်ကြိ​မ်အသုံးြ​ပု​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ Acnes Vitamin Cream ကို​လ​ည်း အသား​အေ​ရြ​ကည်လ​င်ြ​ပီး စိုေြ​ပေ​စ​ရန်အ​တွ​က်တွဲ​ဖက်အ​သုံးြ​ပု​ ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့်မျက်နှာေ​တွ ဘာေြ​ကာ​င့်မှ​န်း မ​သိ​ယားယံြ​ပီး အနီေ​ရာ​င်အစက်များေ​ပါက်လာ​ပါ​တ​ယ်။ ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ပေးေ​စချင်ပါ​တ​ယ် ရှ​င်။
အေြ​ကာ​င်း​ကေ​တာ့ သ​င့်မျက်နှာ​မှာ​၀​က်ခြံ​ရှိေ​န​တဲ့​​အတွ​က် ည​လိ​မ်ခ​ရင်မ်ေ​တွ​ကို ၀​က်ြ​ခံ​မပျောက်မချ​င်း အသုံး​မြ​ပု​ သ​င့်ပါ​ဘူး။ Acnes Powder Lotion နှ​င့်Acnes Vitamin Cream ကို​အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်း​ကို ၃-၅ ရ​က်ခ​န့်ရပ်ဆို​င်း​ပစ်ပါ။ အသား​အေ​ရ ပုံ​မှန်အေြ​ခ​အေ​နြ​ပ​န်ေ​ရာ​က်ြ​ပီး ဆိုလျ​င် Acnes Powder Lotion ကို​၀​က်ြ​ခံ​ကို ထပ်မြ​ဖ​စ်အောင်ကာ​ကွယ်ရန်အ​တွ​က် အသုံး​မြ​ပု​ပါ။Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က်ြ​ခံများ ပျောက်က​င်းပြီးေ​နာက်အ​သား​အေ​ရြ​ပန်လ​ည် ကြည်လင်ရန်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Creamy wash နှင့် Acnes Vitamin Cream ကို​တွဲ​ဖက်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သလား။
ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီးေ​အာက်ပါ​အချက်အ​တို​င်း လိုက်နာေ​ဆာင်ရွက်သ​င့်ပါ​သ​ည်။ ၁။ မျ​က်နှာ​သန့်စင်ရ​န် Acnes Creamy Wash ကို​အသုံးြ​ပု​ ပါ။ Acnes Vitamin Cream ကို ည​အိပ်ယာ​မ​၀င်မီ​အသုံးြ​ပု​ပါ။ Acnes series ကို​တ​စ်ေ​န့​လျ​င်၂-၃ြ​ကိမ်အ​သုံးြ​ပု​ ပါ။ စိ​တ်ကျေ​နပ်မှု​ရှိ​လိ​မ့်မ​ည် ဟု​မျှော်လ​င့်ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
Acnes Washing Bar ကို​မည်ကဲ့​​သို့​​အသုံးြ​ပု​ရ​ပါ​သလဲ။
ခန္ဓာ​ကိုယ်နှ​င့်မျက်နှာ​ရှိ​၀​က်ခြံ​ဖုေ​လးများ​ကို​ကာ​ကွယ်ရ​န် အတွက်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င် တ​စ်ြ​ကိမ်မှ​နှ​စ်ကြိမ်အ​သုံးြ​ပု​ နိုင်ပါသ​ည်။
Acnes Series ထဲ​မှ မိတ်ကပ်ကို​အသုံးြ​ပု ချင်ပါ​တယ်ရှင့်။ Acnes compact powder များ​ရှိ​ပါ​သလား​ရှ​င့်။
Acnes Series ထဲ​မှာ Acnes Compact powder ကိုေ​တာ့​​မ​ရ ရှိ​နို​င်ေြ​ကာ​င်း ကျေး​ဇူး​တင်စွာြ​ဖ​င့်ေြ​ကာ​င်ြး​ကား​ပါ​ရေ​စ​ရှ​င့်။ သို့ေ​သ်ာလ​ည်း Acnes Make up base ကို Apo Teenie compact powder မှ အေ​ရာင်သုံးမျိုး​ရှိ​သ​ည့်အန​က် သ​င့်အသား​အေ​ရာ​င်နှစ်လိုက်ဖက်မှု​ရှိေ​သာ အေ​ရာင်ကိုေ​ရွးချယ်အ​သုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။ ကျေ​နပ်လိ​မ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါ​သ​ည်။ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​သ​ည်။
ကျွန်ုပမျက်နှာ​သ​ည်ဝ​က်ြ​ခံများ​ရှိြ​ပီး အဆီြ​ပ​န်သော အသား အေ​ရ​အမျိုး​အစားြ​ဖစ်ပါ​သ​ည်။ AC creamy wash ကို​သုံး​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ သို့ေ​သ်ာအဆီ​နှ​င့်ဝ​က်ြ​ခံများ​လျော့​​ပါး​သွားြ​ခ​င်း​မ​ရှိ​ပါ။ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး​အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ေ​ပး​ဖို့ေ​တာ​င်းဆို​ပါ​တ​ယ်။
မျက်နှာ​သစ်ရာ​တွ​င်AC 3F ကိုေြ​ပာ​င်း​လဲ​အသုံးြ​ပုြ​ခ​င်ြး​ဖ​င်ပိုမို​ထိေ​ရာ​က်ေ​စ​နိုင်ပါ​သ​ည်။ T-Zone area နှ​င့်ချွေးေ​ပါက်ကျ​ယ်သောေ​န​ရာ များ​ကို​အဆီ​ထိ​န်းရန်အ​တွ​က် ACOS ကို​တွဲ​ဖ​က်အသုံးြ​ပု​ သ​င့်ပါ​သ​ည်။ေ​နာက်ဆုံး​အဆ​င့်တွ​င်ဝ​က်ြ​ခံ​အတွ​က် AC3N ကို​၀​က်ြ​ခံ​ဖု များေ​ပါ်​သို့​ တိုက်ရို​က် အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။ တ​စ်ေ​န့​လျ​င်၂-၃ြ​ကိ မ် အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
ကျွန်ုပမျက်နှာ​မှာ ၀​က်ြ​ခံများ​စွာေ​ပါ​က်ေ​န​ပါ​တ​ယ်။ ၀​က်ြ​ခံ​ကို treatment လုပ်ဖို့​​အတွ​က် ပ​စ္စ​ည်း​အမျိုးမျိုး​အသုံးြ​ပု ​ခဲ့​​ပါ​တ​ယ်။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့်တိုး​တက်မှု​မ​ရှိ​ခဲ့​​ပါ​ဘူး။ကျေး​ဇူးြ​ပုြ​ပီး​အြ​ကံ​ဥာ​ဏ်ေ​ပး​နိုင်မ​လား။
(၁)ပထမ​ဦး​စွာ Acnes Creamy Wash သို့​ Acnes Foaming Wash ကိုမျက်နှာ​သန့်စင်ရန်အ​တွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။
(၂) ဒုတိယ​အဆ​င့်တွ​င်ြ​ပည်တ​ည်ေ​နသော​၀​က်ြ​ခံ​ဖုများ​ကို​ကု​သရ​န်အတွ​က် Acnes Sealing Jell or Acnes Offensive Cream ကို​အသုံးြ​ပု​ နိုင်ပါ​သ​ည်။
(၃)ေ​နာက်ဆုံး​အဆ​င့်တွ​င် အဆီ​ထိ​န်း​ရန်နှင့် ၀​က်ြ​ခံ​ထပ်မံြ​ဖစ်ပွားြ​ခ​င်း ကို​ကာ ကွယ်ရ​န် Acnes Oil Solution ကို​အသုံးြ​ပု​နိုင်ပါ​သ​ည်။
AC3W နဲ့​ Powder lotion ကို​အသုံးြ​ပုေ​န​ပါ​တ​ယ် ဒါေ​ပ​မ​ယ့် ၀​က်ြ​ခံေ​တွ​ကမျက်နှာ​မှာေ​ပါ​က်မြဲေ​ပါ​က်ေ​န​ပါ​တ​ယ်။ ဘာ့ေြ​ကာင့်ပါ​လဲ၊ ၀​က်ခြံ​ပျော​က်အော​င်ဘယ်လို​လုပ်ရ​ပါ့​​မ​လဲ။
Acnes creamy wash နဲ့​ powder lotionေ​တွ​ဟာ​၀က်ြ​ခံ​အတွက်အ​သုံးြ​ပု​ ရ​တဲ့​​ပ​စ္စ​ည်းများ မ​ဟု​တ်ြ​က​ပါ​ဘူး။ အဲ​ဒါေြ​ကာင့် - Acnes Creamy wash ကိုမျက်နှာ​သစ်ရ​န်အတွက်အ​သုံးြ​ပု​ပါ။ - ၀​က်ြ​ခံ​ဖုများ​ပျောက်က​င်းအရန်အတွ​က် Acnes Sealing Jell ကို​အသုံးြ​ပု​ပါ၊ - အဆီြံ​ပန်ြ​ခ​င်း​က​င်းေ​၀း ရန်အ​တွ​က် Acnes Oil Remover ကို​အသုံးြ​ပုနိုင်ပါ​သ​ည်။
Read 35237 times